महिला लघुवित्तको आइपीओ निष्कासन हुने मिति परिवर्तन: अब कहिले देखि खुल्छ ? - Lekhapadhi मुख्य समाचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
महिला लघुवित्तको आइपीओ निष्कासन हुने मिति परिवर्तन: अब कहिले देखि खुल्छ ?
लेखक : लेखापढी २४ माघ २०७७, शनिबार १४:५१ मा प्रकाशित
काठमाडौं : महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपीओ निष्कासन मिति परिवर्तन भएको छ । यसअघि कम्पनीले माघ २८ गतेदेखि छिटोमा फागुन २ गतेसम्म आइपीओ बिक्री खुला गर्ने आह्वानपत्र जारी गरेको थियो ।
अब माघ ३० गतेदेखि फागुन ४ गतेसम्म आइपीओ बिक्री खुला हुने भएको छ । तर सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको बिहीबारको पत्र अनुसार आइपीओ निष्कासन मिति परिवर्तन गरिएको महिलाले जानकारी गराएको छ ।
उक्त समयमा सबै सेयर बिक्री नभएमा फागुन १४ गतेसम्म खुला रहनेछ । कम्पनीले कुल ४ लाख कित्ता आइपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । यसमध्ये ०.५% (५ हजार कित्ता) कम्पनीका कर्मचारीरुका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने ५% (२० हजार कित्ता) सेयर म्युचुअल फन्डलाई बाँडफाँट गरिएको छ । बाँकी ३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा प्रतिसेयर आम्दानी ६५ रुपैयाँ ३७ पैसा पुग्ने अनुमान रहेको छ । साथै, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस लघुवित्तको प्रतिसेयर नेटवर्थ २९४ रुपैयाँ र आव २०७८–७९ मा ३८५ रुपैयाँ पुग्ने अनुमान रहेको छ ।